HANGZHOU SPEEDWAY IMPORT&EXPORT CO., LTD hita ao amin'ny xiaoshan hangzhou, dia orinasa iraisam-pirenena ara-barotra sy fanondranana masoivoho.
Efa tao amin'ny indostrian'ny shaft nandritra ny 15 taona mahery.
Ny fanavaozana sy ny fiaraha-miasa amin'ny fandresena-fandresena, ny serivisy mpanjifa no tena tanjonay. Manantena amim-pahatsorana fa ny mpiara-miombon'antoka rehetra dia afaka manana fampandrosoana maharitra miaraka aminay.misaotra.
Ny fifantohana amin'ny asantsika
Fividianana kojakoja & varotra / masoivoho fanondranana sy fanafarana manokana amin'ny kojakoja fiara / Fanaraha-maso ny orinasa / fanaraha-maso sy fanaraha-maso ny kalitao / fandefasana & lozika / trano fanatobiana entana / fampiasam-bola mifantoka amin'ny orinasan'ny kojakoja fiara
Ampahany tsipika mitondra fiara
Automitive drive shaft sy ny ampahany
Foibe fanohanana mitondra
Fambolena pto drive shaft
PTC universal coupling
Fifandraisana indostrialy mavesatra
Fitambarana sy shaft
Fiara mekanika sy kojakoja
CV joint sy drive shaft
Ho an'ny fanondranana
Betsaka ny traikefa amin'ny masoivoho Export
Betsaka ny traikefa amin'ny logistics
Ho an'ny vokatra
Betsaka ny traikefa amin'ny fanaraha-maso sy fanaraha-maso kalitao
Betsaka ny loharanon'ny kojakoja Auto any Sina
Ho an'ny fandraharahana
Ny vidiny tena mitombina sy mifaninana, ho an'ny teny rehetra, dia atokanay ihany ny tombony azonay.
Fandefasana haingana (30-45 andro)
1 Serivisy mahomby, mamaly haingana ny mailaka sy ny antsonao
2 Ny fahaiza-manaon'ny baiko manokana (Mahafa-po ny baikonao kely na entana maro)
3 Haingana santionany fampandrosoana fahaiza-manao, dia afaka mamokatra araka ny santionany.
4 Product specificity ny customization
5 Tazony ny tahiry ara-dalàna.
Ho an'ny baiko
Vitsy ny qty.ary ny baiko kely dia azo ekena
Mandanjalanja tsara ny "DQP" izahay
D Livraison haingana
Q kalitao tsara
P vidiny mirary sy mifaninana.